Linux-yakavakirwa Windows. Zvakare dhongi kugorosi | Linux Vakapindwa muropa
Gore rakapera Steven J. Vaughan-Nichols, Computer World munyori wanga wafungan Windows 11 yakavakirwa paLinux. Mazuva mashoma gare gare Microsoft yakaita zviziviso zvakaramba. Gore rino ndiko kuchinjika kwenhoroondo yeakavhurika sosi kufamba. Eric S Raymond ave iye fungidzira kuti Windows ichava mhando yewaini, ndiko kuti, zambuko pakati peWindows zvinoshandiswa neLinux kernel.
En a post inoratidza izvozvo Bhizinesi reMicrosoft rakachinja kubvira Azure yakaunzwa, Mutsara wayo wechigadzirwa wemhinduro dzegore, nhasi Azure inoumba sosi yayo huru yemari, uku kutengesa kwemakomputa edesktop kuri kudonha. Kubva ipapo anotora theoretical leap uye anosvika pakufunga kuti Windows inomira kuita purofiti uye inozoshanduka kuve kurasikirwa.
Pano ini ndinofanira kuita akati wandei kujekeswa. Kudonha mukutengeswa kwematafura (uye mabhuku emabhuku) hazvina kungomira chete, zvakadzoserwawo nekuda kwedenda. Uye, pane zvimwe zvishandiso izvo Windows zvinogona kuiswa pairi.
Gore rapera Microsoft yakaunza iyo Surface Neo piritsi ine Windows 10x inoshanda sisitimu
Windows 10x iri Windows 10 yakagadzirirwa maviri-skrini uye zvakapetwa michina. Iyo yakavakirwa paWindows Core OS (WCOS)
Windows Core OS iseti yezvinhu zvakakosha zveWindows zvakagadziriswa kuti zvishande pamhando dzakasiyana dzemidziyo. Iko kusanganiswa kwezvikamu zveOneCore OS, iyo UWP / Web uye Win32 mapakeji ekushandisa, uye iyo C-Shell compiler.
Wakaona izwi rekuti Linux chero kupi?
Dzimwe nharo dzaRaymond ndiyo inotevera Linux vhezheni yeEdge browser uye kuti vagadziri vayo vari kushanda pamwe nezvikwangwani zveLinux kernel iyo ichavandudza kuenderana kweWindows Subsystem yeLinux (WSL)
Linux-yakavakirwa Windows. Nei ndisingatende mune izvo mukana
Edge yakavakirwa paChromium uye, Chromium chirongwa chine Linux shanduro. Tichifunga kuti Microsoft iri kuyedza kuunza vatengi kumasevhisi epamhepo seMicrosoft 365, Edge inosanganisirwa mushe pamwe neaya masevhisi uye, sekutaura kwatakaita rakawanda basa ratove kuitwa, zvingave zvisina musoro kusatakura. Isu hatisi kutaura nezve iyo Linux vhezheni yeIzwi.
Nezve WSL, chinangwa chavo kubva pakutanga kwaive kupa Linux uye yakavhurika sosi programmers inokurudzira kushandisa Windows uye Visual Studio. Mune mamwe mazwi, iyo inopesana nekwekuenda kune izvo Raymond anoenda.
Icho chinotevera chokwadi chekuti iwe unowedzera kune saladhi ndiProton. Ichi chirongwa cheValve chinobvumira mitambo yeWindows kubva kuchitoro cheStam kushanda paLinux.
Chinhu pamusoro pemitambo ndechekuti ivo ndivo vanonyanya kudzvinyirira bvunzo yekukwanisika kune Windows yekuteedzera layer, zvakanyanya kupfuura bhizinesi software. Tingave tatova panguva iyo Proton tekinoroji yakanaka zvakakwana kumhanya Windows bhizinesi software paLinux. Kana zvisina kudaro, isu tichava munguva pfupi.
Proton ichiri yakashandurwa vhezheni yeWINE, uye kune zvirongwa zvakaita seMhando yekugadzira kana iyo Kindle yeWindows muverengi pachayo iyo isingagone kumhanya pasi peWINE. Uye isu hatisi kutaura pamusoro pezvakawandisa zvirongwa.
Mukuvhara, anoshamisika kuti nyanzvi yemakambani kuMicrosoft yaizoitei uye inopedzisa kuti ivo vaizotsvaga kushandura Windows kuita Proton-senge yekumusoro yakaturikidzana pamusoro peLinux kernel. Iyi denderedzwa yaizodzikiswa nekufamba kwenguva sevanogadzira Microsoft vanowedzera mamwe matinji kuLinux kernel.
Sekureva kwake, mukana weMicrosoft ndewekuti waizodurura chikamu chinoramba chichiwedzera chemari dzayo dzekuvandudza.
Iyo yekupedzisira huru yaanofungidzira ndeye Microsoft inoraira kupera kwehupenyu hwehupenyu hwekuteedzera kweWindows uye software vatengesi vanorega kugadzira mabinaries eWindows vachida Linux-inoenderana software.
Ini pamwe ndinonyanya pro-Microsoft yeLinux Vakapindwa muropa vanyori. Kunyangwe zvakadaro, ini ndanyatsojeka kuti iyo kambani ine yakavhurwa sosi haisi rudo, ibhizinesi. Ivo vanogona chete kuburitsa yekugadzirisa shanduro dzeWindows mune ramangwana, asi ivo havazoregedze pakuichengeta.
Iwo musika unoratidzika kunge uri kunanga kune-gore-based services uye Chromebook-senge zvishandiso kutsiva desktops nemabhuku ekunyorera. Muchirevo ichocho zvine musoro kutakura Edge kuenda kuLinux asi kwete mamwe mashandiro anoshanda zvakanaka mugore senge Microsoft Office. Panogona kuve neLinux-based Edge OS, asi Windows haisi kuenda.
Zvingangodaro, Microsoft ichaedza kukwezva vashandisi veLinux kumashandisirwo ayo egore, uye kana musika ukadzoka kuti usarudze software yakaiswa imomo, kuvakwezva zvakare kuWindows.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux-yakavakirwa Windows. Zvakare dhongi kune gorosi
Bhizinesi reMicrosoft nhasi harisi nevatengi.
Vanga vachirapa vanhu kwemakore makumi mashanu sekunge vaive makambani uye zvinovabhadharira vakawanda sekuchinja.
Iwe unoda kuchinja here? Sei vasingazvipire ivo kumakambani?
Ini zvakare ndinofunga kuti iyo nyowani Microsoft yakafanana neyekare iyi:
Kumbundira, wedzera, wedzera.
Ini ndinotenda kuti Windows yakakundwa muhondo neChannel OS kuti ive yakavakirwa pamusoro pegore uye inofanirwa kuve yakatsaurirwa kuGAMES, chinova chinhu chete icho WINDOWS iri.
Microsoft yagara yakatarisana nedambudziko. Chengetedza kuenderana kwezvigadzirwa zvako pasi peiyo yazvino modhi (izvo zvinoreva kuchengetedza izvozvi kuchengetedzeka uye matambudziko ekushanda) kana kutora njodzi uye nekupa yakatemwa kucheka kune unix-mhando kernel. Sezvakaita Apple panguva iyoyo. Nhoroondo inotitaurira kuti anofarira kuita "zvishoma nezvishoma" shanduko. Takazviona kare, pandinoburitsa Windows 8 chete kuitira kuti mushandisi "ajaira" dzimwe nzira dzekushanda (handiyo chete nyaya). Asi zvishoma nezvishoma isu taona mafambiro ainoita mupfungwa iyoyo, kubva pamazuva andakatenga bhaira. Nhasi unogona kuona kuti, semuenzaniso, Windows iri kuenda kune graphical server kuti igadzirise chimiro chayo. Chinhu icho mune unix nyika chagara chiri chetsika. Izvo zvichaita kuti zvigone kutama mangwana pasina kurasikirwa neakawanda "kuenderana". Sezvo iwe uchifanira kutendeseka. Chinhu chega chinonyatso chengeta Windows ichimhanya isoftware catalog inomhanya pamusoro payo. Uye icho chinhu icho Redmond chakajeka nezvacho.
Ini pachangu, ndinofunga uchave murefu uye unotenderera nzira pamberi peiyo yekupedzisira nhanho. Asi chero munhu anga ari munzvimbo ino kwenguva yakakwana anozoona kuti neimwe vhezheni itsva yeWindows, mashandiro matsva eiyo Unix yenyika anowedzerwa. Kunyangwe ivo vachizvipa mazita ane zita nyowani rekushambadzira zvinangwa (senge rinoshanda dhairekitori uye nhare mbozha).
Uye uchave mugwagwa murefu, nekuti kune mamirioni akawandisa ari panjodzi. Uye nhoroondo inotidzidzisa kuti makambani anorasikirwa ne "hutungamiriri" hwavo kashoma kuti vadzokere zvakare hutungamiriri hwavo uye vanopedzisira vanyangarika muzvinyorwa zveyeuchidzo. Asi bvunza chero echizvarwa chitsva kana vakanzwa nezveIzwi risina kukwana, Lotus, nezvimwe.